Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseGerman Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Soccer Stopper eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Snapper". Indaba yethu ye-Manuel Neuer Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF futhi ON-Pitch amaqiniso angakaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomgomo wakhe wokuyeka amakhono kodwa bambalwa abheka ukuthi i-Bio ka-Manuel Neuer yinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
UManuel Peter Neuer wazalwa ngo-27 March 1986 eGelsenkirchen, eNyakatho Rhine-Westphalia, eJalimane.
Wazalelwa kunina, uMarita Neuer nobaba, uPeter Neuer. UManuel wakhuliswa emkhayeni wamaKatolika futhi ilunga eliziqhenya leSonto LamaKatolika elisekelwe eGelsenkirchen.
Waya eGesamtschule Berger Feld, njengabanye abadlali bebhola abadumile, njengawo I-Mesut Özil. U-Neuer wathola ibhola lakhe lokuqala lapho eneminyaka emibili futhi edlala umdlalo wakhe wokuqala ngo-3 March 1991, izinsuku ezingu-24 ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwesihlanu. Wakhula ekufundeni kusuka eqenjini lakhe nasezithombeni, engumakhelwane waseJalimane nalowo owayengumgcini wegoli laseSchalke UJens Lehmann.
Emgwaqweni womuzi wakubo, uManuel nomfowabo babedlala amahora amahora amaningi ngenkathi bebesishiya izifundo zabo. Njengoba ekhula, isithakazelo sakhe kulo mdlalo asizange siphume futhi wazithola ebhalisile kuGesamtschule Berger Fled uhlelo lwebhola lomusha. Wakhula imigomo yabo engaphansi konyaka ngaphambi kokubizwa nguSchalke 04 okwamanje ngonyaka we-1991. Lo mdlalo uManuel ube nethuba lokuhlangana nesithombe sakhe no-Arsenal, UJens Lehmann.
Njengoba edlala ohlelweni lwe-Schalke, uManuel wenza okungaphezu kwamathemba wonke umuntu. Kwafika ngesikhathi umqeqeshi weqembu eqala ukunakekelwa ngokukhethekile emdlalweni kaManuel futhi wahlonipha amakhono akhe, ngakho-ke, uManuel waqhubeka ethuthuka futhi ngesikhathi esesesikoleni, wayeseyilungu lomqeqeshi wezinga eliphezulu.
Ngokushesha ku-1st ngoJuni 2011, eSchalke naseBayern Munich baqinisekise ukuthi uNeer uzohambisa eBayern ngoJulayi 2011. Ukuthutha kwakudingeka i-€ 22 yezigidi ezibikiwe. Ngemuva kokuhlukunyezwa kwabalandeli baseBayern ngokumelene neNeuer (abanye abalandeli babengajabuli ngeBazern ukuthenga umgcini weSchalke). Ingxoxo etafuleni ephakathi kweBaern kanye neqembu labaxhasi abalandeli lenzeke ngo-2 July 2011. Phakathi kwezinye izinto, kunqunywe ukuthi uManuel Neuer "uzobhekwa njengelungu eligcwele leqembu leF FC Bayern Munich, okufanele liphathwe ngenhlonipho efanele.
Ngaphezu kwalokho, inzondo kuye kufanele iphele ". Akuzange kuthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi uNeer aqale ukuphula amarekhodi eBayern Munich. Unqobe amashidi ahlanzekile kunawo wonke ahlanzekile ngokulandelana, esehambe ngaphezu kwemizuzu engu-1,000 ngaphandle kokuvuma. Wathuthuka emlandweni owawubanjwe ngaphambili Oliver Kahn.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Ngesinye isikhathi, kwakubonakala sengathi uManuel Neuer uzoguga noK Kathrin Gilch (oyisibonelo kanye noboya bezinwele), kodwa ubuhlobo babo buphela ku-2014. Ngezansi isithombe sezodwa ezimbili ngezikhathi ezithile izinyoni zothando.
Ku-2015 umqeqeshi weqembu lesizwe laseJalimane wanikeza intombi yakhe entsha uNine Weiss ngemuva kokuhlukaniswa kwakhe. Ukuhamba kwakhe njalo ezindaweni zomphakathi kwaqinisekisa ubuhlobo babo.
UManuel waqala ukuphuma noNine ukuthi umzuzu usanda kushada ngokomthetho ku-Kathrin Gilch, obekade ehlangene naye iminyaka emihlanu. Ngemuva kokuhlangana noNina, uKatrin usalokhu ehamba negoli laseBrazil nge-World Championship. Ngisho nawe u-Kathrin wangena ngokweqile waba nemizwa ejabule, uManuel wazizwa engathandwa. Umzwelo wakhe ngaye kwakungekho ngoba wayevame ukubhekana nobunzima ukuhlangana naye.
Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, uthando lwakhe lwaluphelile futhi zombili amaqembu ahlukana. U-Kathrin wamemezela ngendlela engavumelekile ukuthi abe nayo 'uMnuz Neuer' ohlukanisile ' futhi konke kwaqinisekiswa esidlangalaleni. UGilch akazange avunyelwe ukunikeza imininingwane eyengeziwe, njengoba, ngokusho kukaBild, bevumelene noManuel Neuer ukuba amkhokhele umnikelo wezezimali wenyanga ngokufihla kwakhe mayelana nokuhlukana kwabo. Kubonakala kakhulu kakhulu ukuthi uNine Weiss wadlala indima ekuhlulekeni komshado wabo.
Intombi entsha kaManuel, uNine uvela eBerlin futhi ufunda eSikoleni Sokucwaninga noMthetho lapho ehlangana noNeuer. U-Neuer okokuqala ngqa wabonakala kanye no-Nina Weiss obomvu onobumba obomvu e-Aide Foundation, obanjwe nguyise kaNine ongu-million.
Ama-birdbirds ayebonana ndawonye ngaphambili, eDown Bay, e-Oktoberfest, kodwa engakakulungeli ukuqinisekisa ubuhlobo bawo emuva ngaleso sikhathi. Noma kunjalo, ungumlandeli othembekile wemidlalo yakhe futhi uphuthuma emasimini ngokumomotheka kwakhe okuhle.
Bobabili abathandi babe nomshado omuhle ngonyaka we-2017. Lo mbhangqwana ojabulayo ubophe lo mbono edolobheni elimnandi lase-Adriatic laseMonopoli - elisesifundazwe saseBari, e-Italy.
Okubaluleke kakhulu ngomshado wakhe kwakuwukuthi umgcini wezinhloso waseJalimane wayenemikhonto, ngesikhathi somshado wakhe kuNina. Wayenezinyawo eziphukile ngaleso sikhathi. Noma kunjalo, uNeuer wayengumfanekiso wenjabulo njengoba yena noTeiss bebukeka bekhala ngemva kwalokho.
Ababekhona kulo mkhosi babenjalo Mario Gotze, ehambisana ne-model yakhe yangaphambili-intombi u-Ann-Kathrin Brommel. Kwakumzwakala ubuhlungu ukuba abe khona emshadweni wendoda yakhe yangaphambili. Abalandeli abaningi bakaManuel bawazisa ukuvuthwa kukaKatrin futhi bakhumbula izinkumbulo zentsuku zabo zothando ezindala njengoba kuboniswe ngezansi.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Komndeni
U-Manuel Neuer uvela emlandweni womndeni ophakathi komphakathi ngaphambi kokukhokhelwa kwezemidlalo ebantwini nabathandekayo bakhe. Unesondelene kakhulu noyise, uPeter Neuer.
Unina, uMarita Neuer ovezwe ngezansi ubheka kakhulu kunomyeni wakhe uPeter.
Kusamangalisa njengoba abalandeli bakhe abaningi bengazi lokhu. Umfowabo kaManuel Neuer, uMarcel njengamanje ungumdlali webhola e-Verbandsliga, ilungu lebhola lezinyawo eziyisithupha e-German football League system. Ngezansi isithombe sikaManuel kanye nomfowabo omnene, uMarcel Neuer.
U-Neuer kuzodingeka aqaphele kakhulu uma edlala ibhola nomfowabo uMarcel njengompempe e-German lower League - Verbandsliga.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Personal
UManuel Neuer unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla ka Manuel Neuer: Unesibindi, unqume, uqiniseka, unomdlandla, unethemba, uthembekile futhi unesithakazelo.
Izinyathelo zikaManuel Neuer: Wayengaba nesineke, enesihe, ephuthumayo, engacabangi futhi enolaka kakhulu.
Okuthandwa ngu-Manuel Neuer: Uthanda izingubo ezikhululekile, uthatha izindima zokuhola, izinselele zomzimba kanye nemidlalo ethile.
Okushiwo nguManuel Neuer: Akathandi ukungasebenzi, ukubambezeleka kanye nanoma yimuphi umsebenzi ongasebenzisi amakhono akhe.
Empeleni, u-Manuel unamandla futhi unzima. Uthanda ukuncintisana ukuba ngowokuqala kukho konke - kusukela emsebenzini kuya emibuthanweni yomphakathi.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Game Millionaire
U-Manuel Neuer naye uvele waba udumo olukhulu eJalimane futhi wavele wabonakala 'Wer Wer Wid Millionaire', okuyinto inguqulo yesiJalimane 'Ngubani ofuna ukuba ngumgidi'. Imali eyinqobile kulolu sizo yaya ngqo kuManuel Neuer Kids Foundation.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isidlaliso
I-Neuer ichazwe njenge "Umgcini-mshini" ngenxa yesitayela sakhe sokudlala esiyingqayizivele nesivinini lapho egijima emgqeni wakhe ukuze alindele abaphikisi; Uyaziwa nangokuziphendulela kwakhe okusheshayo, amakhono ahle kakhulu okudubula, amandla, ukuhlehlisa isikhathi eside, umyalo wendawo yakhe nokulawulwa okunembile nokusabalalisa ibhola.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -U-Hobbie wakhe
Ibhola akuyona kuphela umdlalo we-Neuer oyithandayo. U-Manuel naye ujabulela ukuhamba nge-skiing kanye ne-tennis, okwenza kuze kube yilapho eyi-14 futhi ethandana nomlingani noTennis omkhulu uBoris Becker. Umdlalo wakhe wezemidlalo ozithandayo yi-Adidas.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Charity
U-Neuer ungumdlali webhola lezinyawo enenhliziyo yegolide futhi unikele ngemali eningi ku-charity. Ubuye abe nesisekelo sakhe esibizwa ngokuthi uManuel Neuer Kids Foundation esiza izingane ezihlwempu esifundeni saseRuhr. Isisekelo siphinde sinikeze imishini yezemidlalo ekuthembiseni abagijimi abasha abafuna ukuzithenga ngokwabo.
Manuel Neuer Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukukhethwa Kwakhe Nge-Idol
I-Jalimane iye yaba namagoli anezithonjana ezinjengeBodo Illigner futhi Oliver Kahn kodwa u-Neuers wonke umdlali oyintandokazi owake waba yi-Arsenal UJens Lehmann. Uze acabange nomlingani wakhe njengomgcini omkhulu kunabo bonke.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Manuel Neuer Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.